Ndepụta Ndepụta Ndepụta M ... | Martech Zone
N’izu gara aga, mụ na Brandon McGee nwere kọfị, VP na Huntington bank nke pụrụ iche Banlọ akụ Mobile. Blog nke Brandon nwere oke ogo nyocha engine - site na ntinye uche ya na niche ọ na-ede blọgụ banyere ya.
Anyị kparịtara ụka banyere blọọgụ ya na ọbụlagodi na-ekwu okwu mkpanaka nwa oge, o nyela m nghọta mara mma banyere ebe ụlọ ọrụ ahụ na-aga ma ọ bụ ihe na-atọ ụtọ. Nke a bụ nkọwa nke mkparịta ụka anyị - Achọrọ m ịkọrọ ya onye ọ bụla.
Niche, niche, niche... obere, obere, obere. Enwere m anyaụfụ maka nhọrọ Brandon na ịde blọgụ. Enwere m mgbe ọbụlagodi na ịba ụgbụ sara mbara ga-eme ka m nwekwuo azụ; ma ezi okwu di n ’uzo ozo. N'ihi na enweghị m ezigbo aka niche, m na-asọ mpi na ọtụtụ saịtị ndị ọzọ. Brandon ekwesịghị ịlụ ọgụ (ma). Maka ndị gị na-eche maka ịde blọgụ, enwere ọtụtụ mkpọtụ ebe a wee gbalịa ịchọta oge gị!
Na-ahọpụta ngalaba aha. Brandon na Blogger na-akwadozi ya. Nke a bụ ebe 'ma' na-echebara m echiche na mbụ. Ọ bụrụ na mmadụ ekpebie ịde blọgụ gbasara ekwentị mkpanaka ma ha weghaara nnukwu ngalaba aha, Brandon nwere ike ịkwatu ihu na peeji nke Nchọgharị Nchọgharị ka ndị ọzọ na-ebili na ngalaba aha ezubere iche.
Alojado vs. mba. Nhọrọ Brandon na Blogger bụ nnukwu ihe iji mee ka ọ na-agba ọsọ. Ọ nwetara niche ya na ọ na-ede blọgụ mgbe niile na nnukwu isiokwu. Ihe ntanetị bụ n'ezie onye mmeri ma na-azụlite ya ụfọdụ nlebara anya. Agbanyeghị, echeghị m na ọ na-azụlite ya ka ukwuu nlebara anya dị ka ọ nwere ike ịbụ ma ọ bụrụ na ọ ga-anabata ya n'onwe ya. Nchịkọta n'elu ikpo okwu dị ka WordPress ga-enye ya ohere ịdebe nhazi ya, mee njikarịcha njin nchọgharị miri emi, yana 'nwe' ndị na-ege ntị na-aga na saịtị ya (kama ihe ndọpụ uche nke Blogger).
Nke a bụ otu ihe atụ m nyere Brandon, otu esi egosipụta ọdịnaya ya na a SERP. Ọ bụrụ n’ịlele etu esi depụta ederede na njikọ ya na Google, enwere ihe dị mkpa na-efu:
Rịba ama nkọwa nkọwa niile? Adịghị na-akpali akpali, ka ha dị? Na WordPress, ngwa mgbakwunye dị ka Ihe niile na otu SEO Pack na-enye gị ohere ịhazi ihe edepụtara nke metụtara njikọ gị na Google. Nke a na - enye gị ohere ide ederede ụfọdụ, isiokwu bara ọgaranya, na ọdịnaya na - akpali akpali nke ga - eme ka ịpịkwu aka na saịtị gị.
Nke a bụ ihe njikọ m dị ka ya:
Anaghị m ekwupụta ịbụ onye isi ọ bụla nke SEO, mana ike ịgbanwe ọdịnaya egosipụtara n'ime nsonaazụ ọchụchọ gị bụ ihe dị mkpa - ma igwe ọchụchọ ahụ, yana ndị folks na-eji ha.
Ebe ọ bụ na ecommerce na ichekwa ego na ụlọ ọrụ na-ekerịta ụfọdụ okwu nrube isi yiri ka ọ na-agbanwe na ekwentị, a na m atụ anya ịbanye na blọgụ Brandon ntakịrị miri. Ọ na-ama ama kwuru m ụfọdụ nnukwu mobile ụlọ ọrụ ego.
Tags: isiokwu blogBrandon McGeeisiokwu ndị dị na yangalaba ahamba na-akwadoroUntinglọ akụ Huntingtonụlọ akụ na ụzụnicheagwo
Mgbe m kwenyere niche bụ ụzọ m ga-esi, site na ịmalite blọgụ, echere m na ọ bụ ihe egwu.
I will be more tend to cast my net a little wide and then narrow it down as my blog progresses… carve my niche. Dị ka ụzọ dị nchebe maka ịga nke ọma.
Ọ bụrụ na m nwere ike ime ya niile, m ga-enwe 4 ka 6 blọọgụ - otu na mpaghara isiokwu ọ bụla. Echere m na ndị mmadụ na-azụ nri maka ụzọ ha si azụ ahịa maka ihe ha mepụtara… ha anaghị ejide akpa a gwara agwa, ha na-ejide akpa ha chọrọ. 🙂
Nke a ga - enyere m aka itinye uche m na ọdịnaya m yana ịkwalite saịtị ndị ahụ. Nsogbu dị n'ịga na ụgbụ sara mbara bụ na ị na-arụ ọrụ n'ezie megide niche niile dịlarị ebe ahụ. Echeghị m na ị na-enye ọdịnaya gị ohere ziri ezi.
Ee, n'ezie ahụrụ m echiche gị. Ọ bụ ezie na ọ nwere ike isiri gị ike ịmalite n'ihu, ọ ga-eweta ụgwọ ka mma na ogologo oge. (Dị ka ihe ọ bụla n'ezie)
Daalụ maka ihe ncheta maka All na One SEO Pack - Echere m na m na-ede akwụkwọ ahụ na Ngalaba Mbụ na kwụsịrị ọkwa n'okpuru mkpado?
Echiche kacha mma si England!
I nwetara ya!
Daalụ (site n'akụkụ a nke ọdọ mmiri),
Daalụ Doug! 🙂
Nwere olile anya nke oma. M gụrụ gị Blog nwa oge ugbu a wee hụ na ọ bara ezigbo uru, yabụ daalụ!
Enwere m ekele maka okwu ọma ahụ, Jon! Adị m onye na-arụsi ọrụ ike n'oge na-adịbeghị anya yabụ nzaghachi dị ka nke ahụ bụ nnukwu isi iyi nke ike.
Mee 2, 2008 na 10: 10 PM
Ọ ga-amasị m ịnweta otuto, mana ngwa mgbakwunye m nke Seesmic bụ ngwa mgbakwunye Sidebar iji gosi vidiyo ikpeazụ gị. Ekwenyere m - onye dere ihe mgbakwunye Seesmic kwuru bụ ọgụgụ isi!
Nnukwu ederede dị mkpirikpi.
Adị m ọhụrụ maka ịde blọgụ ma gbanwere isiokwu WordPress nke akpọrọ Suffusion nke nwere ihe niile e wuru n'ime ya. Egwu.
Nakwa ekele maka posts.